Cabbage Vestri F1: nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche, ọdịiche dị iche iche, ịgha mkpụrụ na nlekọta ndị na-esote, njide ọgwụ, na ntụziaka na ịzụta osisi - Akwukwo nri - 2019
Crispy na nke ọma kabeeji si gị ubi - niile nuances nke na-eto eto iche Vestri F1
Ọ bụghị onye ọ bụla na-elekọta ubi nwere ike ịnya isi n'ubi ya. Ọ na-achọ ọ bụghị naanị ịgbara mmiri mgbe nile, ma na-arụzi nlezianya.
Vestri bụ otu n'ime ụdị ndị ahụ, nke a na-ewere dịka osisi na-adọrọ adọrọ. Otú ọ dị, onye hụrụ ọrụ ya adịghị atụ egwu nsogbu ọ bụla. Ihe isi ike ndị a na-enweta n'ubi ahụ ga-akwụ ụgwọ dị ụtọ ma na-egbuke egbuke!
Banyere kpọmkwem otú otu dịgasị iche iche si dị, ebe o sitere na otu e si eto ya na otu esi elekọta ya, a ga-atụle ya n'isiokwu a bara uru.
Mgbanwe dị iche iche
Ntuziaka maka nlekọta na ọdịda
Ebee na kedu ka m nwere ike isi zụta osisi?
Kedu oge kachasị mma iji gbanye osisi na-eto eto?
Okpomọkụ na ala
Uwe elu tupu ị gbanye mgbọrọgwụ n'ala
Ọrịa na pests, yana mgbochi ha
Vestri (F1) - osisi siri ike nke nwere oke isi site na 4 ruo 8 n'arọ. Ọdịdị ya ga-atọ ụtọ anya nke ọ bụla na-elekọta ubi: nnukwu, obere bubbly epupụta, a mara mma akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na a nta wax mkpuchi, a rose leaf rosette. Isi nke cabbages ndị dị oke na gburugburu, acha ọcha na-acha ọcha na ibelata. Cabbage nwere ogwe aka dị mkpụmkpụ na ogwe aka dị elu. Ngwakọ bụ dị oké mkpa. Ọnụ ọgụgụ nke na-eto eto maka atụmatụ ahia bụ ihe dịka 90%.
Vestri sitere n'anụ ọhịa nke a hụrụ na Western Europe na Africa. Nke mbụ pụtara na Spain oge ochie. Ndị obodo na-akpọ "aschi." Ebe ọ bụ na kabeeji n'onwe ya chọrọ nlekọta siri ike, ndị mmadụ nọgidere na-edebe ihe nzuzo nke ubi ya. E mesịa, Vestri gbasaa n'ógbè Alaeze Ukwu Rom, Gris na Ijipt.
Ala nke abụọ nke ngwakọ bụ Russia. Ndị ọrụ ugbo anyị, ndị a ma ama maka ịdị uchu ha, na-echegbu onwe ya maka ịzụlite ya. Cabbage bụ ngwaahịa bara uru nke ndị nkịtị nwere ike imeli.
Akwụkwọ edemede oge ochie nke Kievan Rus ("Izbornik Svyatoslav"), nke nwere ngalaba dịpụrụ iche, adịla ndụ n'oge anyị. O gosiputara nchekwa na usoro nke ngwa nke ngwakọ.
Vestri, n'adịghị ka ọtụtụ iche, na-ekwenye na ọ dị. Ọ dị mma maka ịme nri, dị ka akwukwo ya dị ụtọ ma na-atọ ụtọ. N'ihi crisp uto, a ngwakọ dị mma karịsịa nhazi. Nwanyị ọ bụla kwesịrị ịma na ụdị dị iche iche zuru oke maka sauerkraut.
njupụta na nri;
ịdị mma n'ụdị;
ezighi ezi n'ime ulo;
nhazi na ịgbara mmiri dị mkpa.
A na-azokarị mkpụrụ osisi kabeeji na ụlọ ahịa dị n'ịntanetịOtú ọ dị, e nwere ndị ọzọ. Ọnụahịa ha na-esi na 15 ruo 40 rubles maka 10 PC.
Nhọrọ nke ụlọ ahịa dị na Moscow na St. Petersburg:
Moscow, m. Rokossovskogo Boulevard, Open w., 14, p.2.
Moscow, m. Komsomolskaya, akụkụ Riga, 3.
Moscow, ọdụ ụgbọ okporo ígwè ENEA, st. 1st Ostankino, d.53 (TC "Rapira", ebe obibi 26E).
Moscow, VDNKh metro, Prospekt Mira, d. 119, VDNKh ogige, ụlọ ntaneti 7, ụlọ ezumezu 2.
Moscow, m Maryina Roshcha, nke atọ nke Marina Grove, 40, p. 1, r.11.
Moscow, m Timiryazevskaya, st. Yablochkova, d 21.
Petersburg, ọdụ ụgbọ oloko Ladozhskaya, Zanevsky Ave., d.65, ụlọ 2, ụlọ ahịa ụlọ ahịa Platform.
Petersburg, ụlọ ọrụ Metro Pionerskaya, Kolomyazsky pr., D.15, k.
St. Petersburg, Moscow, st. Altai, d.16.
Ebe ọ bụ na Vestri bụ oge etiti oge kabeeji (oge site na germination ruo ntozu ntozu bụ 85 - 95 ụbọchị), gbanye ya ozugbo o kwere omume. Oge kachasị mma bụ mmalite nke March.
Maka ndị na-ebido ụzọ, a na-eme ka kabeeji dịkwuo iche iche (jiri peat akụ). Dịka ihu igwe, chọpụta oge ịkụ ihe na ala. Kụrụ seedlings kwesịrị ịbụ mgbe ọ na-ama ike zuru ma mepụtara. Otú ọ dị, ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị na-eme ya na mbụ, n'ihi na osisi ga-enwe oge iji nweta ebe ọhụrụ.
Cabbage seedlings eto kacha mma na anwụ na-acha greenhouses, n'ihi na n'abali, enweghi okpomọkụ dị ala. N'ihi ya, ndị ahụ na-eto eto na-eto ahụike ma kwadebere maka ịkọ ihe n'ubi.
Cabbage nwere ike iguzogide oyi, mana ọ hụrụ okpomọkụ na ìhè. Isi a kpụrụ akpụ na-eguzogide okpomọkụ site na -5 ruo -8 Celsius. A na-ewere oké okpomọkụ dị n'elu + 25 Celsius dị njọ maka Vestri. 15-18 Celsius - weere dị ka ezigbo.
Ọdịiche dịgasị iche iche chọrọ ala dị mma ma dị egwu. na ala acidity. Ndị kacha dịrị na mbụ bụ mkpo, kukumba na poteto.
Otú ọ dị, ihe ọkụkụ ọ bụla ga-enweta fatịlaịza zuru ezu ga-eme. Mkpụrụ nke mkpụrụ ahụ bụ 1.5-2.5 cm. Ọ bụ na ya na osisi kabeeji kwesịrị kụrụ maka ezigbo uto.
A ga-eji mmiri ọkụ (18-23 Celsius) mee ka kabeeji kụrụ n'ala na-emeghe. Mịmiamịmia nwere ike na-arịa ọrịa hypmiamia. Vestri chọrọ mmiri n'oge niile: karịsịa mgbe ọ kụrụ seedlings na mgbe mmalite nke e guzobere isi. A na-aṅụ mmiri ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Isi ihe - emela ya. Ma ọ bụghị ya, ihe oriri ahụ ga-adia.
Ọ dị mkpa! Mgbe mmiri na-ezo ma ọ bụ na-agba mmiri, a chọrọ ka a na-achọ ugwu! A na-eme usoro a tupu e mechie ihe ndị ahụ na-egosi na epupụta pụtara. A na-eme usoro ahụ ugboro 2-3, ọ ga-enye ohere ịmalite mgbọrọgwụ ndị ọzọ.
Mmiri mmiri mbụ ẹkenịmde ke urua na ọkara mgbe ebu seedlings:
ammonium nitrate - 2.5 g.
superphosphate - 4 g.;
potassium chloride - 1 g.
A na-agbaze ihe niile na liter.
Nke abụọ mmiri mgbakwasa mmiriOtu izu mgbe e mesịrị: ammonium nitrate - 3-4 g.
Igbari na liter mmiri.
Ihe mgbakwasa mmiri nke atọ, nke a na-eme ụbọchị ole na ole tupu kere seedlings:
potassium chloride - 2 g;
superphosphate - 8 g.;
ammonium nitrate - 3 g
Nakwa etisasịwo na liter mmiri.
N'ime oge ịba ụba nke kabeeji na-erepịa ọtụtụ ihe dị iche iche si n'ala. Ya mere, ngwakọ ahụ chọrọ nri nri. Vestri zuru oke na-edozi ahụ. N'okpuru ụbịa na-akọ ubi, ọ bụ ihe na-achọsi ike ime nri, na oge opupu ihe ubi ọ chọrọ nitrogen, potassium na phosphorus. Ọ dịkwa mma ịme ka nri ahụ dị omimi.
Ebe ọ bụ na oge site na ọdụ ụgbọ elu ruo ntozuzuzu bụ ụbọchị 85-95, a ghaghị ime owuwe ihe ubi na July na August. Ọ bụ ihe siri ike nchịkọta kabeeji; ihe kachasị mkpa ịmara ụfọdụ njirimara, nkwado nke ga-echekwa mma nke akwukwo nri Naanị ịchọrọ mma ma ọ bụ spatula (ọ bụrụ na ịchọrọ igwu ya na kabeeji ahụ).
Jiri nwayọọ nwayọọ belata kabeeji kabeeji, na-ahapụ obere ala na ụkwụ na-eme nri (3 ruo 5 cm n'ogologo).
Edobela isi nke kabeeji n'ala. Ọ ka mma ịtọ ha n'ala ma ọ bụ akpa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nchekwa nke kabeeji, jide ogwe ndị dị n'ime ogige. Akwụkwọ elu kwesịrị ịtọ.
Mgbe ị na-egwu ala ngwakọ si n'ala, jiri nlezianya kpochapụ usoro mgbọrọgwụ nke ala ma dọpụsịa akwụkwọ yellowed.
Kpoo kabeeji na mgbọrọgwụ n'elu ala.
Ọ dị mkpa! Echefukwala igwu mgbọrọgwụ ndị ọzọ na ụkwụ ụkwụ ụkwụ ka ha wee nwee ike ịzụlite ọrịa dị iche iche.
A ga-echekwa ihe a kụrụ n'ubi kwesịrị ekwesị n'oge mgbụsị akwụkwọ na n'oge oyi. Vestri na-eburu ihe ngwa ngwa n'ụdị ọhụrụ (ihe dịka ọnwa 3-4), ya mere ọtụtụ n'ime isi ndị isi maka gbaa ụka. N'okwu a, akwukwo nri anaghị eri vitamin na nri.
Hybrid Vestri zuru oke na-eguzogide ọgwụ ọjọọ. Ọ na-atụ egwu fusarium wilt na vascular bacteriosis (ncha oji).
Kabeeji dị ka ọ na-eri ọ bụghị nanị ndị mmadụ, kamakwa pests dị iche iche. Ebe ọ bụ na akwụkwọ Vestri dị ụtọ, akwukwo nri dị n'okpuru ọgụ nke ụmụ ahụhụ dịka:
babanuha (kabeeji akwukwo ebe);
caterpillar kabeeji nla.
Ihe nchebe kachasị mma bụ mwepụ kpamkpam nke ihe ọkụkụ nile na-ewepụta ihe ubi site na akwa, igbo ahịhịa, na-egwu ala tupu ị kụọ. Na-agbanye ihe ubi ahụ mgbe niile ma wepụ ala ma jiri mmiri wetụ ya mmiri. Jiri ọnyà dị iche iche na-eji ụtaba dị ka nri idide (ísì nke osisi a na-adọta ụmụ ahụhụ na-adọrọ mmasị).
Iji tufuo kabeeji ijiji chọrọ spraying akwukwo nri infusion nke burdocknke a na-etinye maka ụbọchị abụọ (anyị na-etinye 2.5 kg nke anuahade epupụta n'ime 9 lita nke mmiri ọkụ). Mee ka uka ahụ pụta.
N'ihi ya, Vestri adịghị dị ala karịa ụdị ndị ọzọ. N'agbanyeghi ihe isi ike nke na-eto eto na ogologo oge, ọ na-eme nke ọma acclimatized na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ. Akpokọta nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-ejikọta efere ọ bụla, ga-enye ya zest. Ọ bụrụ na i jiri nlezianya na-echekwa akwụkwọ nri, mgbe ahụ, uto Vestri ga-amasị gị na ndị ị hụrụ n'anya.
Esemokwu dị iche iche: gịnị bụ ihe dị iche n'etiti turnips na turnips?
Eyịm na ọka leekee: mgbe owuwe ihe ubi na otu esi echekwa?
Nzọụkwụ nzọụkwụ maka ịmalite eggplant seedlings n'ụlọ na foto nke ọ bụla ogbo
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Crispy na nke ọma kabeeji si gị ubi - niile nuances nke na-eto eto iche Vestri F1